Deg Deg:Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo rasaas xoogan oo socota - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Deg Deg:Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo rasaas xoogan oo socota
Deg Deg:Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo rasaas xoogan oo socota
Goor dhaw ayaa qaraxyo is xigxigay oo xoog leh laga maqlay meel u dhaw xerada saraakiisha, degmada Deyniile ee gobolka Banaadir.
Illaa laba qarax oo iska daba dhaw ayaa ka dhacay banaanka xerada sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, waxaana qaraxyada kadib bilaawday rasaas, taas oo ilaa hadda ka dhaceysa nawaaxiga xerada Saraakiisha ee degmada Deyniile.
Goobjooge ka ag dhaw xeradaas oo ku taalla degmada Deyniile ayaa sheegay in qaraxyadu ay ka dheceen banaanka hore ee xerada, intaas kadibna ay rasaas ka bilaabatay gudaha iyo daafaha xerada.
Xaaladda ayaa aad u kacsan welina lama ogaa karo khasaaraha ka dhashay qaraxyadaas iyo rasaasta ka dambeysa, sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in dagaalyahano hubeysan ay xerada gudaha u galeen, in kastoo aan si rasmi ah loo ogaa karin sida ay wax u jiraan.
Wixii soo kordho iyo qasaaraha ka dhashay qaraxyadaas naga filo goor dhow
Previous article(Daawo) Ugaaska beesha Mareexaan oo ku eedeeyay Farmaajo in uu hurinaayo xiisadda GEDO
Next articleMaraykanka oo si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Axmad Madoobe